Soomaaliya, 04 March 2019
Shabaab dilal fulin jiray oo Muqdisho lagu qabtay
Ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho ayaa qabtay saddex nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabab oo qorshaynayey inay dilal ka gaysteen magaalada.
Boosaaso: Muran ka taagan suuq la doonayo in la xiro
Mas’uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa soo saaray amarro cusub oo ay ku xirayaan suuqa kalluunka iyo marsada ee ku dhexyaalla dekedda Boosaaso.
Ilayska VOA: Dhibaatada tahriibka iyo saameyntiisa
Ciidanka Kenya oo ka Baxay Faafaxdhuun
Ciidamada Kenya ayaa shalay si lama filaan ku noqotay mas’uuliyiinta Gobolka Gedo ee Somalia uga baxay magaalada Faaxadhuun ee Gobolkaas Gedo, taasi oo markiiba ay la wareegeen maleeshiyada ururka Al-Shabab.
Muqdisho: Mas'uul Degmo oo Qarax ka Badbaaday
Qaraxa oo ahaa miino la dhigay waddad dhinaceeda ayaa waxaa lala beegsaday baabuur uu la socday gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka Garasbaalleey Cabdullaahi Gumnuri, balse mas’uulkan ayaa sheegay inuu ka badbaaday qaraxan.
Hoobiyeyaal lagu Weeraray Villa Somalia
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaafiic hoobiyeyaal ah lagu weeraray Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Madaafiicdan oo la sheegay inay ahaayeen ilaa iyo shan ayaa qaar ka mid ah ay ku dhaceen gudaha madaxtooyada.
Nugaal: Dhallinyaro Dil lagu Xukumay
Maxkamadda Darajada Kowaad ee gobalka Nugaal ee Puntland ayaa maanta dil ku xukuntay 5 dhalinyaro ah oo ku edeysanaa kufsi ay u geysteen gabar jirtay 16 sano, kaas oo horay uga dhacay magaalada Gaalkacyo.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaad ku dhageuysan doontaan qubanayaal ku saabsan siyaasadda Somalia oo uu ugu weyn yahay weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho
Weerarkii Muqdisho oo lasoo afjaray
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyn soo afjaray weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab sheegatay oo ka dhacay waddada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdihso.
Maxaa soo cel-celiya qaraxyada Muqdisho?
Faaqidaadda: Yay tahay in Somalia ay xulufo la sameysato.